धुलिखेल अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत एक बिरामीको नि-धन !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/धुलिखेल अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत एक बिरामीको नि-धन !!
काठमाडौं- काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालमा आइसो`लेसनमा उपचाररत एक बिरामीको नि-धन भएको छ । अस्पतालको आइसो`लेसनमा उपचार रत बिरा`मीको पु`ष्टि गर्दै अस्प`तालका प्रवक्ता डा. सुमन ताम्रा`कारले अन्य विवरण भने खुलाएनन् ।
कोरोनाको संक्र`मणकै कारण निधन भएको हो भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता ताम्राकारले भने, ‘हाम्रो अस्पतालको आइसोलेसनमा भएको बिरामीको मृत्यु भएको हो । तर यसको कारण केहो हा`मीले भन्न मिल्दैन । कोरोना परी`क्षण गरेको रिपोर्ट पनि ल्यावबा`ट गोप्य रुपमा स्वा`स्थ्य मन्त्रा`लयमा जान्छ । हामी लाई नै पनि थाहा हुँदैन ।’
अस्पताल स्रोतका अनुसार नि`धन हुने सु`त्केरी हुन् । उनको त्रि,वि ,शिक्षण अस्पतालमा डेलि`भरी भएको थियो । १० दिन अघि त्रि.वि. शि`क्षण अस्पतालमा शिशुलाई जन्म दिएकी उनी अस्पतालबाट डिस्चा`र्ज भएर घर पुगेकी थिइन् । सिन्पा`ल्चोकको बाह्र`बिसेकी उनमा घर पुगेपछि श्वास`प्रश्वा`समा समस्या आएपछि बिहीबार धुलिखेल अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
अस्पतालको आइसो`लेसनमा उपचाररत उनको शु`क्रबार बिहान मृ*त्यु भएको हो । आमाको नि`धन भएपछि शिशु`लाई अस्पता`लमै राखिएको अस्पतालका एक चिकित्सकले बताए । धुलिखेल अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको कोरोना परीक्षणमा उनको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । अस्पता`लको प्रयोग`शालामा कोरोना पोजे`टिभ देखिएकी उनको नि`ध`न भएपछि अहिले अस्पताल सि`ल गरिएको छ । उनको पुन: कोरोना परी`क्षण गर्न पठाइ`एको छ ।
(खबरहब बाट साभार गरिएको न्युज )
थप ३ सय ३४ जना कोरोना संक्रमित भेटिए , यो सगै नेपालमा संक्रमितको संख्या २ हजार ६ सय ३४ पुग्यो
कोरोनाबाट थप दुई जनाको मृ`त्यु, मृ`तकको सं`ख्या ४७ पुग्यो